Mitandrema Rehefa Mampiasa Tranonkala Fifaneraserana
NAHOANA IZANY NO TENA ILAINA? Mety hahasoa ny tranonkala fifaneraserana, nefa mety hampidi-doza koa. Aleon’ny Kristianina sasany tsy mampiasa azy io mihitsy. Misy indray mampiasa azy io ihany mba hifandraisana amin’ny fianakaviana sy ny namana. Tian’ny Devoly anefa raha simba ny lazantsika sy ny fifandraisantsika amin’i Jehovah rehefa mampiasa tranonkala fifaneraserana isika. Ahoana àry no hahalalana ny fandriky ny Devoly? Ahoana no hanalavirana azy ireny? Tahafo i Jesosy ka ampiasao ny toro lalana ao amin’ny Tenin’Andriamanitra.—Lk 4:4, 8, 12.
FANDRIKA MILA HALAVIRINA:
Mandany fotoana amin’ny tranonkala fifaneraserana. Tsy hanam-potoana hanaovana zavatra ara-panahy isika raha mandany fotoana mampiasa azy io
Toro lalan’ny Baiboly: Ef 5:15, 16; Fi 1:10
Mijery zavatra mampiahiahy. Mety ho lasa tia mijery sary vetaveta na hijangajanga ny olona mijery sary manaitaitra ny filan’ny nofo. Mety hiala amin’i Jehovah koa ny olona iray raha mamaky zavatra nosoratan’ny mpivadi-pinoana
Toro lalan’ny Baiboly: Mt 5:28; Fi 4:8
Mametraka sary tsy mendrika na manoratra teniteny foana. Mamitaka ny fo, ka mety tsy hampaninona antsika ny hanao an’ireo. Mety hanimba ny lazantsika anefa izany, na hanafintohina ny hafa
Toro lalan’ny Baiboly: Ro 14:13; Ef 4:29
JEREO ILAY VIDEO HOE MBÀ FETSIFETSY AMIN’NY INTERNET!, ARY IARAHO MIDINIKA HOE INONA NO AZO ATAO MBA TSY HO TRATRAN’IRETO: